Indonezia · Desambra, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Indonezia · Desambra, 2018
Tantara mikasika ny Indonezia tamin'ny Desambra, 2018
Ny Solosaina Findain'ny Solombavambahoaka sy ny Maripahaizana Lisansy ho an'ny Filoha
Niteraka fitroarana ny adihevitra mafana mikasika ilay drafitrasan'ny DPR (Solombavambahoakan'i Indonezia) hanova ny lalàmpanorenana, hamadihana ny maripahaizana Lisansy ho zavatra takína mialoha amin'ireo rehetra hirotsaka hofidína ho filoham-pirenena. Mahaliana be ireo bilaogera indoneziana ihany koa ny olana mikasika ilay fikasan'ny DPR hividy solosaina finday ho an'ny mpikambana tsirairay ao aminy.
Mediam-bahoaka12 Desambra 2018
Misy valinteny roa mahaliana izay mifanipaka tanteraka mikasika ilay fanontana faharoa ny Playboy Indonezia, izay navoaka tao amin'ny biraony vaovao tao Bali.
Indonezia: Fankahalàna Anaty Aterineto
Myanmar (Birmania)05 Desambra 2018
Tsy dia tsara loatra ny fifandraisan'i Indonezia sy i Malaizia tato ho ato noho ny samy filazan'ny roa tonta ho tompon'ireo rakitry ny ela ara-kolontsaina zarainy. Manoratra mikasika ilay fifandirana anaty tambajotra eo amin'ireo mpampiasa aterineto avy amin'ireo firenena roa ireo i Carla.
Alemaina05 Desambra 2018
Indonezia: Lehilahy Masina Mpampirafy ary Fahafahambaraka Nanjo ny Depiote Iray Amin'ny Resaka Firaisana Ara-nofo
Fivavahana05 Desambra 2018
Tsy misy zavatra tena mahavery hevitra noho ny resaka eo amin'ny tontolon'ny blaogy Indoneziana nandritra izay herinandro vitsy lasa izay. Miresaka mikasika tranga roa toa mitovy fa nefa tsy mifandray : ny vady faharoa an'i Aa Gym sy ny fahafahambaraka nanjo ny depiote Indoneziana iray avy ao amin'ny Antoko Golkar...
Fahalalahàna miteny03 Desambra 2018
Nanery ny Biraon'ny Lehiben'ny Fampanoavana hampiato ny famonjana ny mpampianatra vehivavy iray izay niharan'ny fanorisorenana ara-nofo avy amin'ny lehibeny ny hatezeram-bahoaka.